Home Wararka Garoonka diyaaradaha magaala ka mid ah oo ay habeenkii maamulaan Shabaab.
Garoonka diyaaradaha magaala ka mid ah oo ay habeenkii maamulaan Shabaab.
Maamulka Degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyay amaanka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi oo maalmahaan qaraxyo ay ka dhex dhacayeen.
“Haddii aan warbixin ka bixiyo xaalada amaan, maanta waa wanaagsan tahay, shalay ayay qaraxyo garoonka geliyeen iyagii ayaana ku dhintay, haddana xaaladeena waa wanaagsan yahay”ayuu yiri Guddoomiye ku xigeenka amniga.
Previous articleEditorial “President of Somalia: Mohamed Farmaajo – A dictator in the making”
Next articleBeen abuurka Mahad Cawad iyo Muudeey malagu kala diri karaa guddiga Maaliyadda (Akhriso)
Farmaajo oo beri ku wajahan Itoobiya iyo Gud. Cabdi Xaashi oo...